Semalt: Sei kugutsikana uye mazwi echigwaro zvakakosha mu web design?
Iwe webhusaiti isina hutano hwakanaka, uye isina kugadzirirwa zvakanaka, haigamuchiri chero motokari, zvinoreva kuti hazvizobatsiri sangano rinoita zvekutsvaga paIndaneti.Ichave ichipfuura nekutsvaga injini nekuda kwekushaikwa kwezvakakosha. Mashoko ehupenyu nehuwandu anobata basa rinokosha mukusimudzira kusarudzwa kwewebsite yako.
Ivan Konovalov kubva Semalt akakurukurwa pasi apa zvikonzero, sangano rinofanira kuziva zviri mukati uye mazwi makuru
1. Kunyatsoziva zvaunogona kutenga vatengi
Iyo ibasa rebhizimisi rose kudzidzisa vatengi varo pane zvigadzirwa kana mabasa avo. Iwe unogona kungoisa chigadzirwa kune vanotengi uye unotarisira kuti vateerere uye vatenge. Kunyange mumazuva ekare apo ruzivo rwakanga rwakaoma kuuya, makambani akashanda pakudzidzisa vanhu vazhinji vasati vashambadzira chigadzirwa.
Ndicho chikonzero ichi iwe unofanirwa kuva nehutano hwakanaka pamusoro pezvigadzirwa zvako kune vatengi. Uyezve, vatengi vachatsvaga ruzivo rwakanyanya pamusoro pemabhizimisi uye mumusika wese wese kuti vaite zvisarudzo zvine ruzivo. Iwe web design inoisa izvi zvose mukufungisisa ndeyechokwadi kutora vanhu vazhinji.
2. Iwe uchange uine chiremera chepamusoro kusvika kune ruzivo runoenda
Vanhu kazhinji vanovimba newebsite kana kuti munhu kune nyaya iyo inoratidza kuti vanogona kuvimbwa kuti vazive zvavanenge vachitaura. Kana iwe webhusaiti yako ichionekwa nevashandisi vepaIndaneti kuti vave vakanaka semuongorori wemashoko, vanhu vakawanda vanoramba vachiuya. Ndezvipi zvimwe, vanhu vachave nechinangwa chekuti nzvimbo chete yavanogona kuwana mukana wezvigadzirwa zvekushandisa ndiyo site yako. Nokuva nezvinhu izvi zvemukati muhutano hwekugadzirwa kwehutano, iwe unomira mukana wakawanda wekukandira pamusika kune rumwe rutivi rwako.
3. Tsvaga injini yakarongeka
Webhusaiti yega yega yakasikwa pamwe nekuratidzwa kana pfungwa yekuiisa kumusoro kwemaji emagetsi ekutsvaga. Nezvakanaka uye nekuisa mazwi ezvinyorwa panzvimbo dzakarurama, webhusaiti yako ine mukana mukuru wekuonekwa nevanhu vazhinji. Chikonzero chikuru cheizvi ndechokuti injini yekutsvaga ichinyatsonyatsotsanangura mumapeji ekutsvaga.
4. Nzvimbo yako yepaIndaneti ichawana zvimwe zvinyorwa zvakare
Iwe unoziva kuti chii chinoshandiswa kuvaka, asi iwe ungada kuziva kuti zvakakosha sei pawebsite yako. Mawebhusayithi ane ruzivo rwepamusoro-soro uye mazwi akachengetwa zvakanaka, mamwe mawebhusayithi nema blogs achada kudzorerwa zvakare navo. Nenzira iyi, webhusaiti yakadaro inowedzera kuwedzera pane izvo zvisingaiti zvakakunakira Source .